Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigii la socday oo gaaray magaala London
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hogaaminayey ayaa aroornimadii saaka gaaray magaalada London ee dalka Ingiriiska, kaddib markii ay soo dhammeysteen booqasho howleed oo ay dhowrkii maalmood ee u dambeeyey ku joogeen magaalada Brussels ee dalka Belgium halkaasoo ay kulamo kula soo yeesheen madaxda sare ee Midowga Yurub (EU).
Wafdiga madaxweynaha ayaa waxa ka mid ah ku-xigeenka ra'iisul-wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya marwo Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan, wasiiru-dowlaha madaxtooyada mudane Faarax Cabdulqaadir iyo mas'uuliyiin kale.
Booqashada ay madaxweynaha iyo wafdigiisa ku tageen magaalada London ayaa waxa ay ka dambeysay casuumaad rasmi ah oo uu madaxweynuhu ka helay ra'iisul-wasaaraha dalka Ingiriiska Mr. David Cameron, taasoo ujeeddadeedu tahay in labada dal ay ka wada hadlaan xiriirka saaxibtinimo ee ka dhexeeya.
Madaxweyne Xasan iyo wafdigiisa ayaa inta ay joogaan magaalada London waxa ay kulamo la yeelan doonaan madaxda ugu sarreeysa dalkaasi Ingiriiska iyo jaalliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaanba dalkaasi.
Safarrada uu madaxweynuhu ku kala bixinayo dalal fara badan oo adduunka ah ayaa waxa ay qayb ka yihiin dadaallo dowladda Soomaaliyeed ay ku dooneyso in ay dib ugu soo celiso xiriirkii diplomasiyadeed ee kala dhexeeyey Soomaaliya dalalka dunida iyo sidii dowladdu ay u heli lahayd kaalmo dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha, siyaasadda iyo dib-u-dhiska dalka ah, waxayna safarrada madaxweynuhu u muuqdaan kuwo laga gaaray guulo waaweyn.